पहिलो छोरी दशैंमा जन्माउँदैछु: रेखा थापा ~ Hamro Nepali News
पहिलो छोरी दशैंमा जन्माउँदैछु: रेखा थापा
9:56 PM चलचित्र No comments
शोषित, पीडित र पछि पारिएका नारीको शक्ति स्वरुपा हो काली । अब नारी कुनै कुरामा पछि छैनन्, सधै दासी बनेर बस्ने दिन गए ।’
शनिवार दिउँसो बुढानिलकण्ठको मह स्टुडियोमा नायिका रेखा थापा बन्दुक तेर्साउदै यही भनिरहेकी थिइन् । अहिले चलचित्र कालीको सुटिङ चलिरहेको छ जसमा रेखा थापाको मात्र लगानी छ ।
छवि ओझासँग पारिवारिक र ब्यवसायिक सम्बन्ध तोडेकी रेखाले आउँदो दशैंमा छविको चलचित्र ‘लोफर’ सँगै प्रदर्शन हुनेगरी ‘काली’ शीर्षकमा चलचित्रको निर्माण गरिरहेकी छिन् । उनै रेखा थापासँग सुटिङ्ग स्पटमै उज्यालो अनलाईनका लागि अर्जुनकुमार संग्रौलाले गरेको कुराकानी:
चलचित्र ‘काली’ले के बोल्छ ?
कालीले आम नेपाली महिलाको पिडा बोल्छे । उ एउटा सशक्त महिला हो । हेपिएका, पछाडि पारिएका महिला, अवाजविहीन महिलाको कथा हो काली । परिआएको खण्डमा एउटी नारी काली बनेर समाज परिवर्तन गर्न पनि पछि पर्दिन, यही नै कालीले बोल्छे ।
सामाजिक तिरस्कारमा होइन कि सबै महिला सशक्त भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने सन्देश चलचित्रले दिन्छ ।
काली त तपाईको पहिलो छोरी होइन त ?
पक्कै पनि । रेखा थापाले आठ बर्षको दौरानमा रेखा फिल्मस्को ब्यानरबाट धेरै छोराहरु जन्माई । यो कुरा त सबैलाई थाहा छँदै नै छ । अजम्बरी नाता, हिम्मत, किस्मत, रावण देखि हमेशासम्म आइपुग्दा छोराहरु जन्माएकी मैले पहिलोपटक एउटी छोरी जन्माउँदैछु, त्यो काली हो ।
काली यतिबेर गर्भमा छिन् अब दशैंमा स्वस्थ रुपमा जन्मिन्छिन्, सबैको प्यारो बन्नेछिन् । मानिसहरु ढिलो होस छोरो होस् भन्छन् तर म भन्छु ढिलो होस छोरी नै होस् । अझ काली नै होस तर सबैको प्रिय होस् ।
छवि बिनाको काली कस्तो होला ?
हेर्नुस, काली या गोरी सबैको आआफ्नै छवि हुन्छ । फेरि कालीलाई धर्मशास्त्रमा जुन किसिमले ब्याख्या गरिएको छ, त्यो आफैंमा सशक्त छ । मैले आफ्नो तर्फबाट चलचित्रको लागि रातोदिन मेहनत गरिरहेकी छु ।
र, तपाईले अर्को छवि (ड्याडी) को कुरा गर्न खोज्नुभएको हो भने एउटा महिला पुरुष बिना काली बन्न सक्छे तर एउटा पुरुष महिला बिना लोफर बन्न पनि सक्छ । अब तपाई आफै मुल्याँकन गर्नुस् कालीलाई छवि चाहिन्छ या चाहिदैन ?
‘काली’लाई ‘लोफर’सँग भिडाउने नै हो ?
चलचित्र रिलिजको डेट कसैको पेवा होइन । आफ्नो हिसावले म पनि चलचित्र चाँडै रिलिज गर्ने भनेर काम गरिरहेकी छु । लोफरसँग नै भिडाउनु भन्दा पनि हलको उपलब्धता र रिलिजको उपयुक्त डेटको हिसावले संयोग पर्न सक्छ ।
अब भिड्नु नै परेछ भने पनि के फरक पर्‍यो र ? काली लोफरसँग जुध्छे । हिजो कत्रा कत्रा राक्षसहरुको त विनाश गरि कालीले भने लोफरसँग किन डराउनु पर्‍यो र ?
ड्याडी (छवि) को माया लाग्दैन ?
अफकोर्स । छवि आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, ब्यवसाय आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । सम्बन्ध र ब्यवसाय अलग अलग पाटा हुन् । ब्यवसायमा आफ्नै आमाबुवासँग त प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनें उहाँसँग मेरो प्रतिस्पर्धा हुनु कुनै नौलो कुरो होइन । फेरि प्रधिस्पर्धा देखि डराउने मानिस पनि होइन रेखा थापा ।
आर्यन सिग्देल इन्ट्री भएपछि छविसँग तपाईको ब्यबवायिक सम्बन्ध सकिएको हो ?
त्यस्तो होइन । म नारीप्रधान चलचित्रमा मात्र काम गर्छु । चलचित्रको लिड रोल मेरो नै हुनुपर्छ । हिरोको वरिपरि नाच्ने रोल गर्ने चाहना अव छैन ।
उहाँको चलचित्रमा मेरो लिड रोल नहुने भएरै काम नगरेको हो । फेरि, आर्यन, सार्यन को को इन्ट्री गर्‍यो भन्ने कुराले मेरो लागि त्यति महत्व राख्दैन । ड्याडी (छवि) लाई म रेस्पेक्ट गर्छु, तर पनि ब्यवसायिक सम्बन्धमा सधैं एकैनाश हुन्छ भन्ने छैन । उहाँले मलाई धेरै कुरा सिकाउनुभएको छ त्यसको लागि म सधैं आभारी हुनेछु ।
पछिल्लो समयमा तपाईका कुराको धेरै आलोचना हुने गरेको छ नि ?
त्यसलाई म आलोचना भन्दिन । सञ्चारमाध्यम र दर्शक स्रोतको मायाको रुपमा लिएकी छु । मलाई बदनाम गराउन त्यसो गरिएको हो भन्ने लाग्दैन । राम्रो नराम्रो जे जस्तो कुरा भएता पनि त्यसले मलाई सञ्चारमाध्यममा राम्रै स्थान दिइरहेको छ ।
मनमा मेरो पाप छैन । मनमा जे लाग्छ त्यही बोल्छु, क्षणिक रुपमा त्यसले कसैलाई चोट पुगे जस्तो होला तर कालान्तरमा रेखा सही हो भन्ने बुझ्नुहुनेछ । र अर्को कुरा, सञ्चारकर्मीहरुले मलाई साहै्र माया गर्नु हुन्छ, त्यसैले मेरो सानो सानो कुरा पनि वहाँहरुले निगरानीमा राखिदिनुभएको हो ।
करियरको पिक पोइन्टमा एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो, तपाई अब
एउटा पार्टीकी मात्र नायिका हो ?
कुनै पनि पेशामा आवद्व भएको मानिसको पेशा एक ठाउँमा हुन्छ विचार र आस्था भनेको आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । मलाई भोली समाज र देशको सेवा गर्न कुनै पनि प्लेटफर्म त चाहिन्छ नै ।
कुनै विचारसँग आवद्व भएर अगाडि बढ्नुपर्ने नै हुन्छ । त्यसैले मेरो विचार पनि मिलेकोले म एमाओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेकी हुँ । फेरि, रेखा स्वार्थी केटी पनि होइन कि आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्नको लागि उसले पार्टी प्रवेश गरोस् । देश र जनताको सेवा गर्नकै लागि भनेर यो कदम उठाएकी हुँ ।
तर पर्दाभित्रकी रेखा सबैको हो भन्न चाहन्छु । मलाई सबै पार्टी र विचारधारा भएका दर्शकको साथ र मायाले गर्दा नै आज म यो स्थानसम्म आएकी हँु । पार्टी प्रवेश गरें भन्दैमा इन्डष्ट्री छोडीहाल्ने पनि होइन । चलचित्र क्षेत्रबाटै सबैको मन जित्नेछु । ढुक्क हुनुहोस् पर्दाकी रेखाले राजनीति गर्दिन ।
कालीमा पनि पार्टीकै पैसा लगानी भएको सुनिन्छ नि ?
रेखा थापाले चलचित्र खेल्न थालेको १२ बर्ष भईसक्यो । यो अवधिमा मैले सयौं चलचित्रमा काम गरिसके । सबैले आज नम्वर वान नायिका पनि भन्छन् । चलचित्रमा काम गरेको पनि अरुभन्दा राम्रै पारिश्रमिक लिन्छु ।
जाबो एउटा चलचित्र बनाउने तीस चालिस लाख रुपैयाँ रेखा थापासँग छैन होला त ? तपाई आफै अन्दाज लगाउनुस् । कुरा काट्नेहरुले जे पनि भन्छन् । रेखाले एमाओवादी पार्टी प्रवेश गर्‍यो भन्दैमा चलचित्रमा पार्टीको लगानी छ भन्नु सरासर झुट हो । ढुक्क हुनुहोस्, चलचित्र काली रेखा थापाको मेहनतको कमाईबाट बनेको हो ।
तपाई संविधान सभाको चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्छ हो ?
रेखाको मनमा पनि अभिनेत्रीबाट नेतृ बन्ने चाहना त छ तर अहिलेनै के होला भन्न सक्ने स्थिति छैन । चलचित्र काली सुटिङको दौरान तराईका विभिन्न क्षेत्रहरुको भ्रमण गरेकी छु । सबैले हामै्र क्षेत्रबाट चुनाव लड्नुस् भन्नुहुन्छ । यो देख्दा निक्कै खुशी भने लाग्छ ।
आखिर यो त उहाँहरुको म प्रतिको माया हो नि । यदि पार्टीले योग्य सम्झेर जिम्मेवारी दिएको खण्डमा भने जिम्मेवारी लिन तयार छु
khalbali nepal .com bata shavar
भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नु होस् ।
सन्नी लियोन का पछील्ला सेक्सी फोटाहरु साथमा भिडियो
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्
श्रीमतीको हत्या,बिहे गरेर घर लैजान नसकेर हत्या
बिहे गरेको एक साता नबित्दै उदयपुर बेल्टारका रमेश भनिने अमरसिंह कार्कीले चितवनकी सपना पौडेलको राजधानीमा हत्या गरेका छन् । नरदेवीस्थित डेरामा ...
आज थाहा भयो इन्डीया ( भारत ) हिमालयाको हो , हालको नेपालको हो । आज म धेरै दिन पछि लेख्दै छु, लेख्नु पर्ने बाध्यताहरु पनि दिनानु दिन बढ्दै ...
तपाईंको महिनावारी नियमित यस्तै (२८ दिनमा ) रूपमा हुने गरेको छ भने यस्तै १४ दिनमा डिम्ब निस्कासन हुन्छ। यसको हाराहारीमा यौनसम्पर्क हुँदा गर्भ...
सेक्स मनपराउने हिरोइन र निखिलको जुहारी
शुक्रबार नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आउने प्रथालाई पछ्याउँदै आजबाट २ सिनेमा प्रदर्शनमा आएका छन् । शंकर आचार्यको निर्देशनमा राज आचार्यको प्रस्त...
यौन आनन्दका लागी आयो विशेष पेस्ट (प्रयोग बिधि भिडि...
हेर्नुस यसरि सामसुङ ग्यालेक्सी एस4विस्फोट भएर ...
गर्मी को समय छ त्यसैले जानी राखौ : कति बेला गर्ने ...
हेर्नुस् यसरी दिमागबाट निकालियो १५ सेमी लामो किरा
यसरी गरे ,प्रेम विवाह गरेका एक जोडीले विवाह गरेको ...
छोरा पछि ज्वाईका तनावमा ज्ञानेन्द्र
विश्वका पौने अरब मोबाइल फोन ह्याक हुने खतरामा
सेक्स गरे पछि गर्ब नरहन के गर्नु पर्छ हेर्नुस नया ...
नेपाली पोर्नस्टार बिन्दु परियारको अर्को हट सेक्स भ...
इन्टरनेटमा तहल्का मच्चाउदै लिक भएको बिन लादेन गरेक...
थानकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) घुस लिदै गर...
‘सबैले तक्मे बुढा भने, मेरो बुढा कसैले भनेनन्’ : व...
उनले लगाएको लुगा च्यातचुत पारियो। अनि नाङ्गो पारेर...
जिउभित्र चुम्बक भएकी महिला, जसको जिउमा टाँसिन्छ चक...
हेर्नुस त यसरि विदेशबाट फर्कंदा प्राणभन्दा प्यारी ...
घुस लिँदै गर्दा थानकोटका डिएसपी पक्राउ
गोली हाना हान को यो डरलाग्दो (video)
Exchange Rate for 27 July, 2013
हेर्नुहोस नेपाली मसाज सेन्टरमा हुने गरेका बेश्याब्...
बैतडीमा जन्मियो टाउको नै नभएको बच्चा !
हेर्नुहोस अनि थाहा पाउनुहुनेछ आमाको आसिर्बाद कत्ति...
म बेश्या होइन राजकुमारी हुँ,परफ्यूम किन्न ८ करोड ...
हेर्नुहोस त यो के लाज मर्दो ; सांसदले गुप्तांग समे...
कस्तो अचम्म हेर्नुहोस त पानी परेपछी भ्यागुताले ओढ्...
राशिफल आज मिति २०७० साल साउन महिनाको १२ गते तद अनु...
नेपाल वायुसेवा निगमका दुई पाइलट कारबाहीमा, छोरी खे...
४३ बर्षीय महिलालाइ भर्जिन ब्वाइफ्रेन्ड चाहियो !
बाबुराम-कमल थापाको फेसबुक युद्ध
आफ्नै भतिजीलाई गर्भवती बनाई शिशु जन्मार फाल्ने काक...
नेपाली र ईन्डियन बिच घमासान हेर्नुस त यो भिडियो
बन्यो यौनसाथी साइकल, गुडाउँदा सम्भोगको यौन आनन्द प...
चुरेभावरका नेता निरौलामाथि वैद्य माओवादीको आक्रमण
कोरियन भाषा सिक्दैमा रोजगारी पाइँदैन : सरकार
बाहुनले हलो जोतेको भन्दै छोरी दिएनन्
सेक्स भिडियो हेरे पछि दुई गिलास पानी पिउँछु, सबै ठ...
चिनियाँ सैनिकले मागे भारतीय सैनिकसँग खाना…
कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्यो । भाषा परीक्षा ...
युवतीका तिघ्रा पनि भाडामा ! (फोटो फिचर सहित)
पानीको बहाब बढ्यो, नारायणी नदी ‘खतरा’भन्दा माथि
एउटै ज्यान मा २ ओटा टाउको भाकी केटिको स्थिति (भिडि...
हास, खेल ठट्टा गर्ने क्रम मा होस् नपुरेउदा को यो भ...
बहादुरी देखाउदै पिरो खुर्सानी खाँदा ज्यान गयो!!
तपाइको राशिफल आज मिति वि.स. २०७० साल साउन ११ गते ...
दुबईमा एक नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय भिडियो खबर
तिनाउले बगाउँदा दुई किशोरी बेपत्ता
अतिनै डरलाग्दो दृश्य मृगलाई यसरि खायो अजिंगरले ( भ...
नाँच्दै गरेकी केटीलाई ५ जना युवकहरुले समातेर बलात्...
बिरालोसँग सेक्सगर्दा ५ हजार डलर हर्जाना
बाबुराम भट्टराईलाई शिवसेनाको धम्की
रोनाल्डोको फ्री-किकले हातै भाँचियो( भिडियो हेर्नुह...
चार शिर्ष नेताको वार्तामा कसले के-के भने ?
दुध पिउनुका ६ फाइदा
छोटो गुप्तांग हुनेहरुको प्रतियोगिता (फोटोफिचर सहित...
ट्राफिक नियम सिकाउदै कलाकार, गोगंबु बसपार्कमा आर्य...
माया मा कति सम्म पागल हुन्छन मान्छे हेर्नुहोस प्रे...
देउवापत्नीले यसरी पोखिन् नेताकी श्रीमती हुनुको दुः...
श्रीमानले श्रीमतीलाईयसरी सर्पसँग सुत्न लगाएपछी…….
विदेशमा यसरी बन्धक बने आठ नेपाली
‘कपडा खोलेर श्रीमान रिझाउनुपर्छ’
मान्छेलाई खेलाई खेलाई हात्तीले मारेको यो अति नै दु...
कहाली लाग्दा अति दुखद कार दुर्घटनाहरू(भिडियो)
धान रोपारलार्इ खानामा नशालु पदार्थ मिसाई यौन शोषण ...
लिंग बदलेर लोभलाग्दो पिरती (फोटोफिचर सहित)
लाइभ बस दुर्घटना(भिडियो)
झापामा वेश्यावृत्ति गर्ने ४ जोडी रंगेहात प्रक्राउ
पिसाब गर्दा गुप्तांगमा नागले क्वाप्पै
भर्याङमै सम्भोग गर्दा रेलिङमा टाउको अडि्कएपछि………
जिउँदै बच्चाहरूलार्इ यसरी पुरियो खाल्डोमा(भिडियो)
मान्छे झैँ बोल्ने चुरोट
सुपरम्यान र ब्याटम्यान लड्दै
उपत्यकामा मात्रै तीन सय तेस्रो लिंगी यौनकर्मी
आजको राशिफल २०७० साल साउन महिनाको १० गते तद अनुसा...
हेर्न सक्नुहुन्छ ! सारै डर लाग्दो छ त !!अलि कति मन...
नेपालमा पहिलोपटक घुम्ने बुद्धको मुर्ति निर्माण, हे...
गाईको गोबरले दाँत माझेर देखाएपछी हेर्ने छक्क(भिडिय...
मृत्युदण्डको सजायँ सुनाइएका नेपालीलाई बचाउन सकिन्छ...
खोप्ने, रोप्ने र घुसार्नेहरुका अनौठा विश्वकिर्तिमा...
लिम्बुवानमा नांगो सिनेमा बन्द, जीयाको भित्री बस्त्...
the world amazing dance(you must watch one time)
Meri Bassai9July 2013 Full Episiode
बलात्कारको आरोप लगाउने युवतीलाई मोसो र जुत्ताको मा...
Today Rasifal - July 24, 2013 (Nepali Date: Sharwa...
2013 मा पहिलो चोटी रोबट संग सेक्स हेर्नु होस्
तेक्वान्दो खेलाडी हेमा र हमाल ‘हँसिया’मा
देबकोटाले अन्तिम समय सम्म पनि यसरि गाउनु हुन्थ्यो ...
Interview with Dance Queen Samjhana Budhathoki
कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढ्ने, भत्ताबापत मासिक ४...
जब महिलाको कोखबाट घोडाको बच्चा जन्मियो !
गर्भावस्थामा सहबास गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
बि.स. २०७० साल अषाढ २६ गते बुधबारको बिनिमय दर (Ex...
आक्रमणमा परेका “चरी” ले भने, “प्रहरीले कारबाही नगर...
हेर्नुस त यो कस्तो अचम्म : छात्राहरुले ब्रा नलगाई...
तपाइको आज बि.स. २०७० साल अषाढ २६ गते तद अनुसार सन...
७ जनालाई लस्करै कुर्सीमा राखेर हत्या गर्ने किशोर प...
एक रातमा तीनपटक सेक्स गर्छन यी १०२ बर्षका बृद्ध
चरी माथि प्रतिशोधमा आक्रमण
फ्यानले घेरेपछि भागिन् रिहाना
युवतिको स्तन छामेर चेक गर्ने पुलिसको के यही हो अशल...
बिश्वको सबै भन्दा राम्रो र ४५ लाख फुलहरु भएको बगैच...
Copyright © Hamro Nepali News | Powered by Blogger